Mpianjoria malaza eran-tany Ash Dykes eto Madagasikara - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Mpianjoria malaza eran-tany Ash Dykes eto Madagasikara
Mpianjoria malaza eran-tany Ash Dykes eto Madagasikara
By Mialy Mangasoa on septembre 15, 2015 in Bilaogy
Olona 1- 5 volana. Tampon-tendrombohitra 2896 kilometatra ary tangoronam-bohitra miisa 8
Tompon-dakan’ ny fanaovana anjoria (aventure) maneran-tany amin’ity taona 2015 i Ash Dykes izay hanantontosa an’ity dia misongadina amin’ny fiainany ity, ho anisan’ny olona voalohany eo amin’ny tantaratokoa mantsy ny tenany izay hiampita an’i Madagasikara iray manontolo.
« Betsaka tokoa ireo tranga sy olana mety ho sedrain’i Ash mandritra an’io diany io. Ary tena ho fitsapana goavana be ho azy izy io satria dia mila faharetana, na eo ary anefa izany dia tsy atahorana raha ny amiko manokana satria tsy am-pisalasalana no hilazako fa manana ny fahavononana, tanjaka ilaina izy. Ho hiavaka tokoa ny zava-bitany amin’io. » hoy Sir Ranulph Fiennes
Niainga avy any amin’ny faritra faran’ny Atsimon’ny nosy izy ny faha-3 ny volana septambra lasa teo (Cap Sainte Marie), ary avy eo i Ash dia handalo ny tany efitra(na maina) ao amin’io faritra io. Mitohy ny lalany ary hitety ala matevina izy mialoha ny ahatongavany ao anivon’ i Madagasikara (ampovoan-tany) ary hananika hiakatra ny haram-bato avo ny Ankarana Ireo vato maranitra ireo dia antsoina hoe ‘Tsingy’, dia azo ary fototenin’ny hoe « mitsingitsingy », noho ny fahasarotan’ny fiampitana azy ireo raha atao dia tongotra.
Hofamaranana ny diany dia hanaraka an’ireo tangorom-bohitra hita manerana ny nosy manomboka avy any atsimo ka hatrany amin’ny faran-tampony avaratra izay antsoina hoe tendrona Tsaratanana na Maromokotra i Ash. Dia mbola mitohy mianavaratra foana ny diany mandra-pahatongany any amin’ny toerana farany izay avaratra indrindra any Madagasikara antsoina hoe Cap d’Ambre.
Tsy ireo loza toy ny lalana ratsy na ny fiovaovan’ny toetra’andro ihany no ho atrehan’i Ash fa tsy maintsy hiampita renirano feno voay ary hifanena amina bibilava, maingoka sy hala mahafaty ihany koa izy.
Mihoatra ny 90 % ny zavamaniry sy ny biby eto Madagasikara dia tsy hita n’aiza n’aiza erak’izao tontolo izao, raha tsy eto amintsika irery ihany ary betsaka no atahorana ho lany tamingana. Mandritra ny dian’i Ash dia manana fahafahana hianatra ny tantara sy ny zava-manan’aina eto amin’ny firenena izy.
Ny mpiasa mpiaro ny tontolo iainana ao amin’ny Lemur Conservation Network dia mampahafantatra an’i Ash momban’ny olana izay hatrehin’izy ireo manoloana ny fiarovana ny gidro/varika izay tsy hita hafa-tsy eto amintsika izay vasokajy ho anisan’ ny biby mampinono tena tandindomin-doza indrindra maneran-tany mba tsy ho lany tamingana. Anisan’ny iraka hotanterahin’ i Ash ny fitadiavana an’ ity karazana gidro iray izay tena anisan’ny vitsy isa indrindra antsoina hoe « Lepilemur du nord ». Voalaza mantsy fa eo amin’ny 50 eo sisa ny isan’izy ireo ary marihina anefa fa dia tsy mbola nisyfiry loatra ny fikarohan natao momban’azy ireo .
Lepilemur septentrionalis, Ed Louis, Madagascar Biodiversity Partnership
Ankoatr’izany, dia handany fotoana hiaraka amin’ireo foko teratany izay mipetraka lavitra ny tanan-dehibe ihany koa i Ash. Ny sasany amin’izy ireo dia tsy nahita vahiny nandritra ny 60 taona. Ny fiseraserana amin’ireo teratany ireo dia hanampy an’i Ash mba ahafantatra lalindalina kokoa ny fiaraha-monina ary ny fomba fiainan’izy ireo eto amin’ny Nosy.
Hoy i Ash Dykes hoe « Nosy mahagaga sy mahatalanjona tokoa raha i Madagasikara ary tena mbola betsaka ny toerana tsy fantatra any. Ity dia ity dia afahako maneho ny hatsaran-tarehy ny zavaboahary hita ao amin’io nosy io. Hampisedra sy hanosika ahy hiotra hatramin’ny farany izy ity satria ny lalana dia tena sarotra ary betsaka ny zavatra tsy ho ampoizina mety hitranga any. Na izany aza anefa dia tena hikiry mafy aho ary hotafitako ny dia. Mino aho fa hanampy amin’ny famahana ny zava-miafina ao Madagasikara sy hizara ny tantara momba ny olona sy ny zava-maniry ary ny biby izay mbola tsy fantatra ity dia ity. »
About Mialy Mangasoa
Liana amin'ny fiarovanana ny gidro/varika sy ny zava-boahary izay harena goavan'i Madagasikara ny tenany. Mipetraka ao Genève (Suisse) izy ary mandrindra hetsika fampahantarana ny ankizy momba ny gidro sy ny zava-boahary kanto mampiavaka an' i Madagasikara . Manana mari-pahaizana mikasika ny fampandrosoana avy amin'ny "the Graduate Institute" any Genève ny tenany ary matihanina eo amin'ny sehatry ny fanamboarana tranonkala ihany koa « web project consultant ».
View all posts by Mialy Mangasoa →
Fankalazana ny Hetsika maneran-tany « Festival mondial des lémuriens » 2015